2018 Feb မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ Korea Movie အသစ်လေး တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ …
ရှေ့နှစ်ပိုုင်းတွေမှာ Detective K : Secret of Virtuous Widow ( 2011 ) နဲ့ Detective K : Secret of the Lost Island ( 2015 ) ဆိုပြီး ထွက်ရှိထားပါတယ် … ယခုဇာတ်ကားလေးကတော့ ၃ ကား မြောက်ပေါ့ …
အဲ့အလောင်းကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကတူးဖော်ရင်း သွေးတိုက်လိုက်တဲ့အခါ လှပတဲ့မိန်းမပျိုလေးအဖြစ်ပြန်ရှင်သန်လာတဲ့ ”ဝိုယောင်း”
ဂျိုဆွန်းခေတ်မှာ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဆိုတာတကယ်ရှိလားဆိုပြီး သံသယဖြစ်နေတဲ့ စုံစမ်းရေးအမတ် ” ကင်မင် ”
လူသတ်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ” ဂန်ဟွာကျွန်း ”
အဲ့ကျွန်းကိုစုံစမ်းဖို့ရောက်လာတဲ့ အမတ်ကင်မင်းနှင့်သူ့လက်ထောက် ” ဆိုးဖီ ”
ကျွန်းပေါ်ကိုစုံစမ်းဖို့ရောက်လာတဲ့ သူတို့၂ယောက် မိန်းမလေး ” ဝိုယောင်း ” နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ် … ကင်မင် က ဝိုယောင်းဟာ ဒီလူသေမှုတွေနဲ့ပတ်သတ်မယ် ထင်ပြီး တထစ်ချယုံကြည်နေတယ် …
ဒါပေမဲ့ ဝိုယောင်းဟာ သူ့မှတ်ဉာဏ်ပျောက်ဆုံးနေပြီး ဘာမှမမှတ်မိဘူးလို့ ကင်မင်းကိုပြောတဲ့အခါ … ကင်မင် ကမှတ်ဉာဏ်တွေမှတ်မိအောင်ကူညီပေးမယ် … မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုပြန်ဖမ်းပေး ဆိုပြီး အလဲအလှယ်လုပ်ခဲ့ကြတယ် …
တစ်ဖက်မှာလည်း ပြန်ပြီးလက်စားချေဖို့ကြိုးစားတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး ” ဂျိုအင်ရော ”
ဂျိုအင်ရော နှင့်တွေ့တိုင်း သူ့မှတ်ဉာဏ်တွေ ပြန်ပြန်ပေါ်လာတဲ့ ” ဝိုယောင်း ”
ဝိုယောင်း ရဲ့သေဆုံးမှုက ဘယ်သူ့ကြောင့်လဲ ?
ဂျိုအင်ရော ကရော ဘာလို့လက်စားချေဖို့ ကြိုးစားနေတာလဲ ? ကင်မင်ကရော ဝိုယောင်းရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုပြန်ရှာပေးနိုင်မလား ?
ဆိုတာတွေကိုတော့ Detective K : Secret of the Living Dead ဇာတ်ကားလေးမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ …
Rating အရ IMDb မှာ 6/10 ရရှိထားတဲ့ Korean Comedy , Crime ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် …
File Size : 1.14 GB ( 1080p )
Megaup.net Myanmar1.14 GB Download Usersdrive.com Myanmar1.14 GB Download